Tinoda runyararo: Vaimbi | Kwayedza
Tinoda runyararo: Vaimbi
27 Jul, 2018 - 00:07	 2018-07-26T16:08:58+00:00 2018-07-27T00:03:40+00:00 0 Views
VAIMBI nevanoita zvemitambo yekufadza veruzhinji vari kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvinovhote murunyararo musarudzo dzenyika dziriko musi weMuvhuro, 30 Chikunguru.
Svondo rino Kwayedza yakaita hurukuro nevaimbi nevanoita zvemitambo, avo vari kukurudzira runyararo panguva yesarudzo idzi.
Muimbi wenziyo dzechitendero, Pastor Charles Charamba, vanoti vemakereke vanofanirwa kunamata zvakasimba kuti sarudzo idzi dzikomborerwe uye mutungamiri wenyika achasarudzwa abve kunaMwari.
“Bhaibheri shoko raMwari rinoti vatungamiri chaivo vakazodzwa vanobva kunaMwari. Saka tiri kukurudzira hama dzedu dzose dzinonamata kuti tinyengetere zvakasimba sarudzo idzi dzikomborerwe uye mutungamiri achasarudzwa apa ave achabva kunaMwari.
“Isu tiri maAmbassador eZimbabwe Republic Police, saka tiri kukumbirisa runyararo uye tivhote murunyararo. Zvichabuda musi uyu tozvitambire kuitira kuti tienderere kumberi senyika,” vanodaro Pastor Charamba.
Shasha yemadhirama anosetsa, Admire “Bhutisi” Kuzhangaira, anoti zvakakosha kuti sarudzo idzi dziitwe murunyararo.
“Chikuru ndechekuti tinoda runyararo nekubatana. Remangwana redu riri musarudzo idzi, saka ngatizivei vekusarudza,” anodaro Bhutisi.
Imwezve shasha pakudetemba, Albert Nyathi, anoti ane mufaro mukuru wekuti gore rino – kusiyana nemamwe makore adarika – sarudzo dziri kuitwa murunyararo izvo zvinokudzwa zvikuru.
“Kekutanga muZimbabwe, hapana pambotaurwa nezvevanhu vatemana nematemo, kupondana kana kupisana. Sarudzo idzi takadzimirira. Vanhu ngavaite zvavanoita murunyararo, ndizvo chete zvatinoda,” anodaro.
Muimbi wemusambo weZim-dancehall, Tendazvaitwa Chitimbe, uyo anozivikanwa nevakawanda saNinja Lipsy, anoti mhirizhonga hapana zvainobatsira.
“Achasarudzwa nenyika ngatimutambirei sezvaari. Ndiye anenge adiwa saka ngatimupei rutsigiro rwedu senyika kwete kuita zvemhirizhonga, hapana kwazvinotisvitsa,” anodaro.
Kuchiti muimbi weChimurenga, Dr Thomas “Mukanya” Mapfumo – uyo ari kugara kuUnited States – achitaura paTwitter, anoti musarudzo idzi nyika inofanirwa kuvhota murunyararo.
“Sarudzo dzasvika Zimbabwe, ngatigare nerunyararo uye sarudzo idzi ngatiratidze runyararo nekubatana. Tinogona kupesana pasarudzo asi hazvirevi kuti kutema mumwe nedemo kuti haawirirane nezvaunofarira. Sarudza waunoda wako pachako. Musarwisane,” anodaro Dr Mapfumo.
Imwezve shasha yemadhirama, Tendai Garwe, uyo vazhinji vanoziva saSokostina anoti sarudzo idzi dzakakosha.
“Handei kunovhota tese takanyoresa uye takachena. Tinokurudzira rudo nekubatana. Hatidi mhirizhonga, bodo izvo tinoramba,” anodaro Sokostina.